Taliska AMISOM oo beeniyay in 5 askari Ugandes ay Al-Shabaab dileen – Balcad.com Teyteyleey
Taliska AMISOM oo beeniyay in 5 askari Ugandes ay Al-Shabaab dileen
War Murtiyeed ka soo baxay Taliska AMISOM ayaa lagu beeniyay sheegashada Al-Shabaab ee ahaa askar ka tirsan kuwa Uganda ku dileen Are you in need of cheap kamagra Super, but unable to find it? Buy in for just 4.06 right here! qarax miino oo jimcihii la soo dhaafay ka dhacay degmada Afgooye ee Gobolka Sh/Hoose.
Taliska AMISOM ayaa beeniyay warka Al-Shabaab, iyagoo sheegay inaysan jirin askar ka mid ah iyaga oo waxyeelo ka soo gaartay qaraxaasi, waxayna sheegeen AMISOM in qaraxa lala beegsaday mid ka mid ah gaadiidkooda, balse waxay meesha ka saareen inuu jiro khasaare soo gaaray iyaga.
Dhanka kale AMISOM ayaa sheegtay in Kooxda u qaabilsan miinooyinka ay kala fur fureen labo ka mid ah miinooyinka dhulka lagu aaso, iyadoo Shabaab ayaa qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada ku sheegeen inay 5 askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM, gaar ahana kuwa Uganda ay ku dileen qaraxaas.
Faah faahin la xiriirta Howlgal Ciidamada NISA ku khaarijiyeen Nin ka dhex dagaalamayay Guri ku yaala Degmada Wadajir.